तिर्खा लाग्दा पानी पाउने ठाउँ देखाए जस्तो! - Blogs of Sagar Prasai
तिर्खा लाग्दा पानी पाउने ठाउँ देखाए जस्तो!
Handing Donation of Rs. 1 Lakh to Sangita Pant and EPSA Nepal Team
१५ वर्ष अगाडी संगीता पन्तलाई एउटा हात नचल्ने भनेर आफुले पढाउने स्कुलका प्रिन्सिपलले १५ दिनमै जागिरबाट निकालिदिए। त्यस दिन उनको मनमा एउटा प्रश्न उठ्यो। आफु यतिको पढे लेखेकि मान्छेलाई त अपाङ्गताको कारणले यस्तो विभेद भयो भने कम पढेका वा नपढेका अपाङ्गता भएका महिलाहरूको स्थिति कस्तो होला? त्यसै दिन उनले एउटा अठोट पनि लिईन्- यिनै अपाङ्गता भएका महिलाहरूको लागी जिन्दगी भरी काम गर्ने। त्यसको केहि बर्ष उनले “सामाजिक कार्यका लागी शक्त्ति” भन्ने संस्था सुरू गरिन्। कम पढेका वा पढ्दै नपढेका अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई जुटाएर हस्तकलाका सामान बनाउन थालिन् र उत्पादित बस्तुहरूको लागी बजार पनि खोज्न थालिन्। त्यो सँस्था सुरू भएको १० बर्ष बतिसक्दा आज-उनीहरू सबैको मेहनत र लगनशीलताले गरेर त्यस सँस्थाले ३० जना अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई रोजगारी दिएको छ। उनीहरूलाई कामको भ्याई-नभ्याई छ। सबै जनाको कमाई पनि राम्रै छ। तर यो सबै भुकम्प आउनु अघिको कुरा हो। भुकम्पले उनीहरूको काम गर्ने थलो चर्काईदियो। मेसिनहरू भत्काईदियो। उनीहरूको काम रोकियो। कमाई रोकियो।
सन्तोष प्रसाई दुबईको फ्युचर पाईप ईन्डसट्रिजमा काम गर्छन्। देश नै तहसनहस हुने भुकम्प आएपछि, उनले आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने सबै जना सँग सल्लाह र संयोजन गरेर पिडितको मद्दत गर्नका लागी सहयोग उठाए। उनीहरू आफुले दुखले कमाएको पैसाबाट काटेर उठाएको यो सहयोग रकम राम्रो सदुपयोग होस् भन्ने चाहन्थे।
सन्तोष मेरा दाजु हुन्। उनले मलाई आफूहरूको योजनाको बारेमा सुनाए। मैले संगीतालाई निकै अघि देखी चिनेको थिए। त्यसकारण उनीहरूकोमा भएको क्षतिको बारे पनि थाहा थियो। त्यसकारण मैले सन्तोषलाई संगीताको बारेमा बताएँ र उनीहरूको काम फेरी सुचारू गर्न पाए, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको मन भुल्ने थियो, डर हट्ने थियो र सबै भन्दा ठुलो कुरा कमाई हुने थियो भन्ने सल्लाह दिए। सन्तोष र उनका साथीहरू मन्जुर भए र उनीहरूले जम्मा गरेको १ लाख रुपैया संगीता पन्तको संस्थालाई चर्किएका भवनहरू र बिग्रिएका मेसिनहरूको मर्मत गर्न दिने निर्णय गरे।
र त्यस्तो राम्रो काम गर्ने मौका मैले पाए। आज दिउसो उनीहरूको कार्यलयमा सबै अपाङ्गता भएका महिलाहरू र संगीता दिदीलाई सँगै राखेर १ लाख रुपैयाको चेक दिदा- उनीहरूको अनुहारमा झल्केको खुशीलाई म यो पोस्टमा लेख्न सक्दिन।
संगीता दिदिलाई सहयोग गरेको पैसा मेरो होईन। म यति ठुलो रकम सहयोग गर्न सक्ने हैसियत पनि राख्दिन। तर सहयोग चाहिएकालाई सहयोग पाउने ठाउँ देखाउन पाए- म त्यसमै खुशी छु। तिर्खा लागेको बेला, कसैले पानी त्यहाँ छ भनिदिए जस्तै लागेको छ। धन्यवाद सन्तोष दाई, तपाई र सबै साथीहरूलाई मलाई यस्तो आनन्द आउने काममा सामेल गराउनुभयो।
मैले कतै पढेको थिए- “हामी सबैलाई सहयोग गर्न सक्दैनौ। तर सबैले कसैलाई त सहयोग गर्न सक्छन् नि।“ मैले आज बुझेको कुरा सबैले आफुले सक्ने कसैलाई मात्रै मद्दत गर्ने हो भने- हाम्रो देश फेरी सजिलै उठ्न सक्छ।